Fa maninona no ilaina ny trano mora? | Mon Gasikara à moi : politique et développement
← État des lieux sans concession
Ho aiza marina moa ny Barea? →
Rehefa nandeha moa iny fifidianana iny dia noresahina hoe hanangana building, haka tahaka an’i Miami fa ny votoatin’ilay resaka izay milaza hoe atao izay hananan’ny olompirenena miasa sy mandoa hetra trano fonenana mirary, toa nodiana tsy hita mba ahafahana manevateva ilay mpifaninana. Dia hatramin’izao moa mbola lasa resabe hoe Ratsiraka aza tsy nahavita 20.000 koa nahoana ireo no ahavita 50.000?
Ny sasany moa dia milaza hoe manomboka amin’ny 20 Janoary dia hanisa raha mahita trano 27 mitsangana isan’andro.
Tsara ankehitriny raha azavaina ny rehetra hoe inona no antony anaovana izany ho vaidohan-draharaha ary inona no fomba ahafahana manao izany.
Raha mikasika ny filàna.
Ny kajy ataon’ny mpahay toekarena sy mpahay fanisàna dia milaza fa Madagasikara dia mila manangana trano vaovao 120.000 mahery isan-taona mihoatra amin’ny trano miorina ankehitriny.
Ambonin’izany, maro dia maro ireo trano miorina ankehitriny ety anivon’ny tanan-dehibe, no trano tsy mahazo alalana, tsy mandoa hetra, ary matetika trano tsizarizary tsy manara-penitra.
Mendrika ny hanana trano mirary sy maraka ny fenitra amin’ny maha-olombelona nefa ny rehetra.
Raha resaka toe-karena
Ny fanoitra lehibe indrindra ho an’ny fampandrosoana ny firenena iray dia ny farisihan’ny olona ao amin’ny tsena anatiny amokatra, anara-dalàna ary andoa hetra.
Ny fahafahan’ny maro anisa mindram-bola mba anana izany trano mirary izany sy ny fiasàna mba ahafahana manefa ny vidiny, dia famporisihina goavana ho an’ny rehetra anara-dalàna. Azo lazaina izany fa famporisihana ny olona hanara-dalàna sy hamokatra ny fahafahany mahazo trano mirary.
Ny tarehimarika rehetra koa dia milaza fa ireo trano mora namboarina dia be mpitady tokoa ary ifandrohitana mihitsy aza ny mahazo azy. Raha misy izany fampindramam-bola mirary ahafahan’ny olona mividy trano sy mandoa azy tsikelikely ao anatin’ny 10 na 15 taona ohatra dia tsy misy atahorana mihitsy ho an’ny mpandraharaha ny manorina sy mivarotra ireny trano mora ireny.
Misy filosofy zermanika izay atao hoe Arthur Schopenhauer, tamin’ny taonjato faha 19, dia izao no nambarany mikasika ny fanavaozana :
Ny vina marina rehetra izay sahy nanova hoy izy dia mandalo sehatra telo foana :
1. Tevatevaina sy aratsiana ary lazaina fa adalàna, sy tsy misy fotony aloha.
2. Rehefa hita fa mandroso ilay hevitra dia toherina mafy dia mafy mba tsy androso.
3. Ary rehefa tanteraka dia iarahan’ny rehetra manaiky fa tena nilaina ary hevitra tokony iombonan’ny rehetra.
Ankehitriny izany dia afototra fotsiny io hevitra io : rehefa misy fanantontosàna fantatra fa ilain’ny rehetra sy ny fiaraha-monina satria izay no lazain’ny mpahay toekarena sy mpahay fanisàna, dia mila mpitondra sahy miatrika ny fanoheran’ny hafa sy ny fanaratsiana rehetra mba ahafahana manao ny dingana voalohany mankany amin’ny fanovàna.
Efa fanatra mialoha izany ireo eso sy fanaratsiana nisy nandritra an’iny fifidianana iny satria izay no toetran-draolombelona.
Efa fantatra koa fa betsaka ny anohitra mba tsy hisian’ny fanatanterahana izany vina izany.
Satria efa fantatra fa ilaina ny fanaovana trano mora ampandrosoana ny malagasy anatin’ny toekarena mivoatra sy mirary ho an’ny rehetra.
Farany mikasika ny hevitr’ireo mpitondra taloha izay tsy tanterany : tsy hoe tsy tanteraka ilay hevitra dia ratsy fa ilay mpanatanteraka no tsy nahomby. Fanagasiana ny fampianarana, fanaovana trano mora, famokarana mahasolo ny fanafarana… Hevitra tsara sy mahomby daholo izany fa mila matianina mahay manao izany fa tsy izay adala sy endry rehetra koa kory dia ahavita an’izany avokoa.
Galerie | Cet article, publié dans Développement, est tagué Fandrosoana mirary, Toekarena mandroso, Trano mora. Ajoutez ce permalien à vos favoris.
Un commentaire pour Fa maninona no ilaina ny trano mora?
1 mars 2019 à 4:08
Toetra raiki-tapisaka ao amin’ny olombelona mihitsy ny malaina amin’ny fiovana. Mila finiavana manokana mihitsy izay te-hitondra fiovana satria rehefa mahita ny fandraisana andraikitra sy ny vokatra tsara ny olona izay vao manomboka voasarika.